Shiinaha Mabda'a dalabka ah ee koollada budada ah ee aluminiumka ah ee waxsoosaarka iyo warshad la taaban karo | Teng'an
Mabda'a shaqada ee koollada budada ah ee aluminiumka la shubay ee aerated
Sidaan wada ognahay, aluminium waa bir aad u firfircoon. Waxay ku falcelin kartaa biyo si ay u beddesho hydrogen-ka biyaha ku jira ayna u dhaliso alumina xoog leh. Sababtoo ah dusha sare ee walxaha aluminium budada ah ee loo soo bandhigo hawada waxaa lagu oksijiiyay oksijiinka hawada ku jira, waxay soo saartaa alumina aan firfircooneyn si loo ilaaliyo. Xuubku wuxuu ka hortagaa xiriirka aluminium iyo biyaha. Waxaa jira qadar cayiman oo ah walxo alkali ah oo kujira wasakhda la taaban karo ee hawada ku jirta, sida kalsiyum hydroxide, iyo alumina ayaa lagu kala diri karaa xalka alkaline-ka si loo abuuro metaaluminate. Marka filimka xabagta ee dusha sare ee budada aluminium la milmiyo, aluminiumta birta ah waxay ku falcelisaa biyo si ay u beddesho hydrogen-ka biyaha ku jira una sameysid gelatinous aluminium hydroxide. Si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale caqabad ku tahay xiriirka u dhexeeya biyaha iyo dusha sare ee aluminium birta ah, sida aluminium oksaydh. , Si falcelintu aysan u sii socon karin. Si kastaba ha noqotee, aluminium hydroxide sidoo kale waa lagu kala diri karaa xalalka alkaline-ka si loo sameeyo metaaluminate. Sidan oo kale, xalka alkaline, aluminium wuxuu si isdaba joog ah ugu falcelin karaa biyaha si loo soo saaro gaaska hydrogen ilaa aluminiumka birta ah la wada baabbi'iyo. Haydarojiin ayaa si isku mid ah loogu qaybiyaa saxarka iyadoo leh qiyaastii goobooyin goos goos ah, taas oo balaadhinaysa mugga qulqulka isla markaana samaysanaysa shey silica ah oo qallalan kadib markay adkaatay.
Alwaaxyadeena aluminium ayaa loo adeegsadaa warshadaha dhismaha si loo soo saaro shubka laydhka (AAC) Sida biyaha ku saleysan iyo nooca koollada, waa ku habboon tahay in lagu daro mashiinka sameeya AAC, waxay leedahay wasakh yar oo deegaanka ah.
Dhadhannada leh 65%, 70% ka kooban waxyaabaha adag waa heer. Waxyaabaha kale ee adag iyo cabbirka walxaha kaladuwan ayaa la heli karaa si loo helo qiimeynta gaaska hydrogen ee saxda ah, qaab dhismeedka godadka, cufnaanta cadaadiska cufnaanta, waqtiga falcelinta (waqtiga joogitaanka) ee ku habboon nidaamka wax soo saar kasta.
Hore: Nidaamka wax soo saarka budada Aluminium
aluminium jajab ah aac
aluminium ku jira shubka
qiimaha xabagta aluminium